Mini GmbH ကိုဂျာမနီတွင်တည်ထောင်ခြင်း - ဂျာမနီတွင် LLC
သင်သည်ဂျာမနီ၌အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
Million Makers Germany သည်ဂျာမနီနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခုအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုဖောက်သည်များအားပေးသည်။
ဂျာမနီမှကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီမှကမ်းလွန်တည်နေရာများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
ဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိရိယာများ (အမိန့်ပေးလျှင်)
ဂျာမနီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ဂျာမနီအတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ ဂျာမနီအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဂျာမနီအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဂျာမနီအတွက် CRM Solutions၊ ဂျာမနီအတွက် virtual ရုံး၊ ဂျာမနီအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့် 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏ဂျာမနီ Mini GmbH အမည်ကိုယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Germany Mini GmbH အမည်ကိုရှာဖွေပါ
ဂျာမနီသည်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဂျာမနီပြည်ထောင်စု၊ ဂျာမန်ဂျာမနီဂျာမန်ဂျာမန်ဂျာမန်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီ၊ မြောက်ဂျာမနီနှင့်ဂျာမနီ၊ မြေနိမ့်ပိုင်း၏အခြေခံအကျဆုံးကွဲပြားမှုများကိုတောင်ဂျာစ်တောင်တန်းဒေသ၏ပြောင်းလဲသောမြင်ကွင်းမှမြောက်ဘက်သို့ ဦး တည်သည်။ မြောက်ဂျာမန်ရိုးရိုး။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံ, ဂျာမနီမြင်ကွင်းများကျယ်ပြန့်မျိုးစုံလွှမ်းခြုံ: တောင်ဘက်၏အရပ်ရှည်ရှည်, သက်သက်လိပ်ခေါင်း; မြောက်ဘက်မှသဲများရွေ့လျားနေသောလယ်ကွင်းများ၊ မြို့ပြအနောက်ဘက်ရှိသစ်တောတောင်စောင်းများ၊ နှင့်ဟော်ရီကာချာအရှေ့၏လယ်ပြင်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်တူသောထုထည်ကြီးမားသည့်အရှေ့ - ဗဟိုမြို့သည်ဘာလင်မြို့ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အတော်အတန်ကြာမြင့်စွာကုန်းမြေဖြင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်သောဂျာမနီ၏မြို့တော်နှင့်ရိုင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆွစ်ဇာလန်မှမြောက်ဘက်သို့စီးဆင်းသွားပြီးအမြင်အာရုံဆိုင်ရာလက်မှုပညာ၊ အရေးအသား၊ ဒဏ္endsာရီများနှင့်တေးသီချင်းဖြင့်ချီးမွမ်းသည်။ ၎င်း၏ဘဏ်များနှင့် Neckar၊ Main, Moselle နှင့် Ruhr တို့တွင်အလယ်အလတ်ခံတပ်အဆောက်အအုံများ၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်များ၊ လှပသောမြို့များ၊ စျေးကွက်မြို့များနှင့် Heidelberg အပါအ ၀ င်သင်ကြားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဓိကနေရာများရှိသည်။ (၁၃၈၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော) အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကောလိပ်နှင့် Mainz သည်ဥရောပ၏အထင်ရှားဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုအာရုံစိုက်ရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနိုင်ငံသို့ guests ည့်သည်များများစွာသယ်ဆောင်လာသည့်ဂျာမနီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောခရီးသွားစီးပွားရေး၏အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ ထူးခြားသော၊ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အစားအစာများ (ယင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဝိုင်များနှင့်ဘီယာချက်စက်များ)
အစိုင်အခဲ - အားကောင်းသောစီးပွားရေး
ကြီးမားသောအသုံးစရိတ်စွမ်းအင်၊ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဝန်းကျင်၊ ဥရောပ၏အဓိကအချက်အချာကျသောမော်တော်ယာဉ်ကွန်ယက်၏အဓိကနေရာတွင်တည်ရှိပြီးအလွန်ထူးချွန်သောအလုပ်သမားများ - ယင်းတို့ကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးအမြော်အမြင်ရှိသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏အတွေးများအတွက်တည်ငြိမ်သောနိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္climateာရေးအခြေအနေကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထို့အပြင်သင်၏အတွေးများကိုဥပဒေဖြင့်သေချာစေသည်။
တိုးတက်မှုများ၊ အဖွဲ့အစည်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အတွေးအခေါ်များ - သင်၏လိုင်စင်ရဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဂျာမနီနိုင်ငံတွင်သေချာစေသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေသည်သင်၏အထင်ရှားဆုံးသောအရင်းအမြစ်ကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဘဏ္approachာရေးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေးများကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဗဟိုပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့်သင်၏ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတုအယောင်ကိစ္စများကိုမလုပ်နိုင်အောင်အာမခံသည်။
ဂျာမန်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၉ အထိလူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကတိက ၀ တ်ပြုထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်မှာ ၃ သန်းမျှမြင့်တက်ကာ ၃၃.၄ သန်းခန့်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
Liberal - သင်၏လူမှုရေးဖောင်ဒေးရှင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်
သင်သည်သင်၏နယ်ပယ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ၊ သင်၏မူလနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုပုံစံကိုလည်းထပ်မံသိရှိထားပါသည်။ ဒါကလုံးဝလွတ်မြောက်မှုနည်းနည်းပါပဲ။
တည်းခိုခြင်း - သင်သည်ကျွမ်းကျင်သောအကူအညီနှင့်ငွေကြေးရရှိလိမ့်မည်
သင်စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်တစ်ခုနှင့်ကြံစည်ပါက၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်တည်ဆောက်မှုအဖြစ်ဖြည့်စွက်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရန်၊ မည်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်မည်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည့်အချက်အလက်များမှာအမျိုးမျိုးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံအားလုံးတွင်စီးပွားရေးပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအမှန်တကယ်ပုံဖော်နေသောစီးပွားရေးအမြော်အမြင်ရှိသူများအတွက်ကျွမ်းကျင်သောအချက်အလက်နေရာများရှိသည် - လမ်းညွှန်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုများ၏အလွန်ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်ထို့အပြင်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းများရှာဖွေရာတွင်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ အစိုးရထောက်ပံသောစီမံကိန်းများသည်လည်းထောက်ပံ့ငွေပေးကောင်းပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျလညျး start-up အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ဒေတာအာရုံစိုက်မှာသင်တွေ့ဆုံစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အခြားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြော်အမြင်ရှိသူများထံမှသိသိသာသာလမ်းညွှန်မှုရယူနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုး: တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဂျာမနီတွင်တည်ထောင်ရန်သင်ရွေးချယ်သောအခွင့်အလမ်းတွင်သင်သည်မြင့်မားသောဘဝစံနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသောနိုင်ငံတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဂျာမနီ၏ဘဝပုံစံ၊ ဆွေမျိုးများနှင့်မိသားစုအိမ်နီးချင်းချင်းများသည်နိုင်ငံကိုအံ့သြစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ကြသည်။
ကွဲပြားသောနိုင်ငံများမှလူ ၁၀ သန်းကျော်သည်ဂျာမနီကိုသူတို့၏နေအိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ကွဲပြားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဘာသာတရားများ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းသည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမြင်ကွင်းသို့တက်လှမ်းခဲ့သည်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီးလူကြိုက်များသောအစိုးရသည်ဂျာမနီ၌ငြိမ်းချမ်းသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုတိုးပွားစေသည်။
ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီ၌ဘဏ်လုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဂျာမနီ၌တည်ထောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) ခုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တစ်နေရာတည်း၌ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
ဂျာမနီရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ဂျာမနီရှိသင်၏ရုံးခန်းများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် virtual နံပါတ်၊ ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ဂျာမနီတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျာမနီတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးအကဲဖြတ်မှု၊ ဂျာမနီရှိ CRM Solutions၊ ဂျာမနီရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂျာမနီရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂျာမနီရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂျာမနီရှိအပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂျာမနီရှိဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
ဂျာမနီတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် ဂျာမနီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဂျာမနီမှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်မီသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများအားဂျာမနီ၌လည်းကောင်း၊ ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးရောင်းအားနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် virtual နံပါတ်များ၊ ဂျာမနီတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျာမနီရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျာမနီရှိ CRM Solutions, Merchant account နှင့် payment gateway ဂျာမနီတွင်၊ ဂျာမနီတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဂျာမနီတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ဂျာမနီတွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ ဂျာမနီရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဂျာမနီရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂျာမနီရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဂျာမနီရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုဖို့ဂျာမနီမှာ Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ စျေးနှုန်းများ။
ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဂျာမနီနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE ဂျာမနီအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျာမနီ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျာမနီ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျာမနီ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျာမနီ
ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ဂျာမနီကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● Mini GmbH အတွက်ဂျာမန်ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - $ 1
●ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
●ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးခြင်း
●ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ခန့်တာဝန်ပေးခြင်း
●ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်သင့်အတွက်စံပြကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပေးအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်းဝင်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်သည်ဂျာမနီသို့မဟုတ်စီးပွားရေး ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Mini GmbH ဂျာမနီအတွက်ကုန်သည်အကောင့်
ဂျာမနီရှိ Mini GmbH ၏ဒါရိုက်တာအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ
Mini GmbH ဂျာမနီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Mini GmbH အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Mini GmbH အတွက်ဂျာမနီအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
Mini GmbH အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဂျာမနီ၌တည်၏
သင်ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဂျာမနီကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းပြီးဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ ဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဂျာမနီရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဂျာမနီအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်ဂျာမနီ၌ရှိသောဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီ၌ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဂျာမနီမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည်။ ဂျာမနီ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဂျာမနီတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်နှင့်သင်တို့၏မိသားစုအတွက်ဂျာမနီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်နှင့်သင်၏မိသားစုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သည်။ အဘို့ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဂျာမနီ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဂျာမနီ.
ဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏ဂျာမနီတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များသည်ဂျာမနီ၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဂျာမနီ၌တတ်နိုင်သောကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။
Mini GmbH အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဂျာမနီ၌ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးအပ်သောဂျာမနီအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုပေးသည်။
ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်ဂျာမနီမှ LLC တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများမှာ -
ဂျာမနီတွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
ဂျာမနီရှိ Mini GmbH အတွက်ဂျာနယ်၊ LLC တွင်လက်မှတ်စာအုပ်ဝေပါ။
ဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောဂျာမနီ / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Mini GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ၊ ဂျာမနီရှိအနိမ့်ဂျာမနီ၊ LLC တွင် Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်လျှင်, ဂျာမနီအတွက် Mini GmbH / ဂျာမနီအတွက် LLC ။
Mini GmbH ကိုဂျာမနီတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဂျာမနီရှိ Mini GmbH / ဂျာမနီမှ LLC ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျဂျာမနီအတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာကခွင့်ပြုခဲ့ဂျာမနီ၌ခွင့်ပြုချက်, သင် Million Makers မှာငါတို့လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဂျာမနီမှာဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင့်ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: Gaming, လောင်းကစား, ထီ, ဂျာမနီမှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်ကုန်သွယ် / ပွဲစား, ဂျာမနီအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်း, ဂျာမနီအတွက်အာမခံစီးပွားရေး, ဂျာမနီရှိဘဏ္andာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံပြီးအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာနှင့်အခြားအာမခံနှင့်ပတ်သက်သောဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး, ဂျာမနီအတွက်ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှု, ပိုက်ဆံ ဂျာမနီမှာလဲလှယ်, ဂျာမနီမှာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
ဂျာမနီရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်များသို့မဟုတ်ဂျာမနီတွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ချထားရန်အတွက်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဂျာမနီနှင့် "၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများသည်ဂျာမနီတွင်သာမကဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ၊ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့်။
ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့ရှိဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ဂျာမနီရှိ Corporate Services | ဘာလင်ရှိ Corporate Services | Cologne အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ | Frankfurt ရှိ Corporate Services | ဟမ်းဘတ်အတွက် Corporate န်ဆောင်မှု
ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဂျာမနီ၌ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဂျာမနီ၌ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဂျာမနီ၌ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဂျာမနီ၌ကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျာမနီရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဂျာမနီရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျာမနီရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဂျာမနီရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဂျာမနီရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဂျာမနီရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ
ဂျာမနီရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | ဘာလင်ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ | Cologne အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Frankfurt ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | ဟမ်းဘတ်အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဂျာမနီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဂျာမနီတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဂျာမနီ.
ဂျာမနီရှိ Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဂျာမနီ၌သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဂျာမနီမှာ။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီ၌ပေးအပ်သည်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုဝန်ထုတ်။ ဂျာမနီတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဂျာမနီရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း" ဂျာမနီမှာ
ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဂျာမနီ.
ဂျာမနီရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်ဂျာမနီကနေ။
ဂျာမနီရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ဂျာမနီရှိသင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကူညီသည်။
Virtual Number - ဂျာမနီအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ဂျာမနီရှိ Business VoIP အပါအဝင်ဂျာမနီရှိအခြားသော VoIP ဖြေရှင်းနည်းများဂျာမနီရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသည့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဂျာမနီမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဂျာမနီ ဂျာမနီတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည် $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဂျာမနီ, ဂျာမနီရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဂျာမနီရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိမြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဂျာမနီတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသူများ။ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဂျာမနီ၌သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်၎င်းကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာပြောကြသည်။
ဂျာမနီတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီ၌ Mini GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဂျာမနီ၌ Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ Mini GmbH ပူးပေါင်းမှု၊ ဂျာမနီရှိ Offshore Mini GmbH နှင့်ဂျာမနီ၌ Offshore Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ GmbH တည်ထောင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ Mini GmbH တည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ Mini GmbH တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီမှ Offshore Mini GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန် Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Mini GmbH ကိုဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အထောက်အပံ့ပေးသည် LLC ဂျာမနီ၌ဖွဲ့စည်းခြင်း | IBC ဂျာမနီ၌ဖွဲ့စည်းခြင်း | ဂျာမနီတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂျာမနီ၌နေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုဂျာမနီ၌ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီမှာကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ , ဂျာမနီ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီ LLC မှတ်ပုံတင်, ဂျာမနီ LLC မှတ်ပုံတင်, ဂျာမနီကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ဂျာမနီတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဂျာမနီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဂျာမနီ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဂျာမနီ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဂျာမနီကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ဂျာမနီ၌နေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီ၌ LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်တည်ထောင်သောကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီ၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဂျာမနီတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဂျာမနီ၌ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိ IBC ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဂျာမနီတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဂျာမနီ၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Mini GmbH ကိုဂျာမနီနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဂျာမနီမှာ LLC မှတ်ပုံတင်ရန် IBC ကိုဂျာမနီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဂျာမနီ၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် ဂျာမနီ၌ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်မည်
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဂျာမနီတွင်အထောက်အပံ့များမှာ - ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာလင်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာလင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘာလင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာလင်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကိုologneတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္ပဏီ၊ ကိုလိုနီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cologne မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cologne မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Frankfurt မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Frankfurt မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Frankfurt မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟမ်းဘတ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဟမ်းဘတ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဟမ်းဘတ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဘာလင်တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Cologne အတွက်စျေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း | Frankfurt တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဟမ်းဘတ်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ဂျာမနီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ ဘာလင်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာလင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ကူညီခြင်း။ ဘာလင်ရှိဘာလင်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာလင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာလင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာလင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Cologne ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Cologne ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Cologne ရှိ Cologne ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ Cologne ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cologne ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Frankfurt ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Frankfurt ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Frankfurt ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Frankfurt ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Frankfurt တွင်မှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟမ်းဘတ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟမ်းဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟမ်းဘတ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟမ်းဘတ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဟမ်းဘတ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ ဘာလင်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ Cologne အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့် | Frankfurt တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Hamburg တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဂျာမနီမှာစျေးအနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂျာမနီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ ဂျာမနီမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်။ ဘာလင်ရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘာလင်ရှိဘာလင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘာလင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘာလင်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Cologne တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Cologne ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု, Cologne ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Cologne ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Cologne ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Frankfurt ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Frankfurt ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Frankfurt ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဖရန့်ခ်ဖာ့တ်၌အော်ပရေတာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဖရန့်ကတ်၌ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟမ်ဘာ့ဂ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟမ်ဘာ့ဂ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဟမ်ဘာ့ဂ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဘာလင်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Cologne တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Frankfurt တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Hamburg တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်မြို့ကြီးများမှကူညီခြင်း၊ Cologne, Cologne အတွက် setup ကုမ္ပဏီ, Cologne အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်, Cologne အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်, မြို့ကြီးများ Frankfurt အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်, မြို့ကြီးများ Frankfurt အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်, Frankfurt အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်, Frankfurt အတွက် setup ကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင် Frankfurt, Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည်။ မြို့ကြီးများသည် Hamburg တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Hamburg တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ Hamburg တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Hamburg တွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Hamburg တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်နှင့် Hamburg တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဂျာမနီမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှု | ဘာလင်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Cologne တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဖရန့်ဖတ်မြို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ တန်ဖိုးနည်းကုမ္ပဏ်ီဟမ်ဘာ့ဂ်တွင် ၀ န်ဆောင်မှု
ဂျာမနီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာလင်မြို့ရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ ဘာလင်၌နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘာလင်တွင်ဘာလင်ရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ကော်လ်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ကိုလိုနီတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်တွင်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားတွင်မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီ၊ နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများမှတ်ပုံတင်ခြင်း Frankfurt, Frankfurt တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ Frankfurt တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားမှတ်ပုံတင်၊ Hamburg ရှိ non-resident များအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Hamburg တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ Hamburg တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားမှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဂျာမနီ | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Berlin | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Cologne | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Frankfurt | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Hamburg
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ဂျာမနီတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဂျာမနီမှာကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်ဂျာမနီအတွက်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးကိုဂျာမနီနိုင်ငံ | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဘာလင် | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ဖရန့်ဖတ်မြို့ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Hamburg တွင်
ဂျာမနီတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ ဘာလင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Cologne တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို Frankfurt တွင်ထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Hamburg တွင်ထည့်သွင်း
သငျသညျဂျာမနီမှာ Mini ကို GmbH မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူထောက်ခံနိုင်သလား ဂျာမနီ၌ LLC မှတ်ပုံတင် | ဂျာမနီရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျာမနီ၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဂျာမနီရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂျာမနီမှာနေထိုင်သူများနှင့်ဂျာမနီ Mini GmbH တည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ Offshore Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ Mini GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီမှ Offshore Mini GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ Offshore Mini GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် Offshore Mini GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် Mini GmbH ပါဝင်မှု၊ ဂျာမနီ၌ Mini GmbH နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီနှင့်ဒေသခံများမဟုတ်သူများနှင့်အတူ LLC LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီ LLC မှတ်ပုံတင်, ဂျာမနီကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်, ဂျာမနီမှာကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဂျာမနီမှာကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်, ဂျာမနီ LLC ပေါင်းစည်းမှု, ဂျာမနီမှာ LLC ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဂျာမနီနှင့်ဂျာမနီနှင့်အတူနေထိုင်သူများနှင့် IBC ဂျာမနီရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီမှ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီခွဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္ပဏီ၊ ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံမှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီ၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် LLC ကုမ္ပဏီနှင့်ဂျာမနီနှင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီ ဂျာမနီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီတွင် IBC ကုမ္ပဏီနှင့်ဂျာမနီနှင့်အတူနေထိုင်သူများ၊ ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အတူနေထိုင်သူများ၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျာမနီရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ။
Mini ကိုဂျာမနီ၌ထည့်သွင်း | ဂျာမနီရှိ Incorporate LLC | IBC ကိုဂျာမနီတွင်ထည့်သွင်းပါ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် Incorporate LLC ကုမ္ပဏီ ဂျာမနီရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ဂျာမနီ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျာမနီရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဂျာမနီရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီကိုဂျာမနီတွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သည်သို့မဟုတ်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်အမြတ်အစွန်းများခြင်းကြောင့်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကြောင့်လူသိများသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ ဂျာမနီ၌ရှိပြီးဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဂျာမနီရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားဘာလင်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cologne တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဂျာမနီမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
သင်သည်ဂျာမနီ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဂျာမနီရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ်ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဂျာမနီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ ဂျာမနီတွင်အလားတူပင်ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ သို့မဟုတ်ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်, Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Cologne တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Frankfurt တွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Frankfurt တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဟမ်းဘတ်, ဟမ်းဘတ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန် ၎င်းသည်ဟမ်းဘတ်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဟမ်းဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ သို့မဟုတ်ဟမ်ဘာ့ဂ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဟမ်ဘာ့ဂ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘာလင်တွင်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Cologne တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Frankfurt တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟမ်းဘတ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Porzellan-Manufaktur Meissen ။
Destination Germany - ခရီးသွား Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
Johann Wolfgang ကိုဗွန် Goethe
Grimm Brothers မှဇာတ်လမ်းများ
The World Factbook - ဂျာမနီ
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - ဂျာမနီ
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - ဂျာမနီ
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ဂျာမနီ
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ဂျာမနီ
Deutsche ဘဏ် https://www.db.com/company/index.htm
DZ ဘဏ်အုပ်စု https://www.dzbank.com/
ReiseBank, ဖရန့်ဖတ် https://www.reisebank.de/filiale/frankfurt-1071761
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဂျာမနီရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သော Clients များအားထောက်ခံမှုမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဂျာမနီ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ လက်နက်၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်၊
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ (သို့) ၀ င်ရောက်သောနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
●ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အနက်ရောင်စာရင်းဝင်ဂျာမနီဥပဒေအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂျာမနီမှသို့မဟုတ်ဂျာမနီမှဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဂျာမနီရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဂျာမနီသို့သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမခံရပါ။
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဂျာမနီမှသို့မဟုတ်ဂျာမနီသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဂျာမနီနိုင်ငံ၊
●ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေအခြေခံဂျာမနီတွင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ကိုင်သောဂျာမနီရှိသို့မဟုတ်မှဂျာမနီသို့လာရောက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ဂျာမနီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးမထားပါ။
●ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သောဂျာမနီရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့ဂျာမနီသို့လာရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဂျာမနီတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဂျာမနီ, ဂျာမနီ ဘဏ်အကောင့်, ဂျာမနီ ယုံကြည်မှု ဂျာမနီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဂျာမနီ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဂျာမနီအဘို့
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-germany/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-germany/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-germany/